.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: သီချင်းစာမျက်နှာ ၉
Love Kg Ma Lay
i am ferry (bay gyi)
နင်သာရှိရင် (Nine One)
Romeo & Quliet
Flash Songs Album!
Valentine Day! Album
ဒီ စာမျက်နှာက Error လို့ ရေးထားတဲ့ သီချင်းလင့်များ ပျက်နေပါသည်။ ပို့ပေးထားကြသော သီချင်းပိုင်ရှင်များ လင့်အသစ်ထုတ်ပြီး
ပြန်ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက် အသစ် တင်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများလည်း သီချင်းနာမည်နဲ့ လင့်ကို ဆိုဒ် Menu က C- Box မှာ
ထားသွားနိုင်ကြောင်းပါ။ လာရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါသည်....။
Posted by Thurainlin at 06:40